နံပြားနဲ့လန်ဘား watch out | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Opinions & Discussion » နံပြားနဲ့လန်ဘား watch out
နံပြားနဲ့လန်ဘား watch out
တိုင်းပြည်တခုဟာ သူနဲ့ထိုက်တဲ့ အစိုးရ ပဲရတယ် ဆိုရိုး အမှန်၊အမှားပြောရန် အတော်ခက်သဗျ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ ပညာရှင် စကားဖြစ်ပြီး နိုင်ငံရေးသမား အတွက်တော့ မသုံးအပ်ဖူးပေါ့လေ။ ပြည်တွင်းမှာ ရှိစဉ်ထဲက စစ်ဗိုလ်ဆို ဘုရားထူး၊ ပညာနဲနည်းပေးရင် ဒူးတန်းထောက်၊ ကိုယ်ကြောက်တာ ဖုံးချင်တော့ သူများပါ လိုက်ကြောက်ခိုင်း၊ အာဏာလက်ရှိ ဂွင်မိသူတွေကို ဝေဖန်တာကလဲ ကိုယ်မရလို့ ပြောနေတာများ၊ ဒီလိုနဲ့ သွက်ချာပါဒလိုက်ရင်း ဘွားဒေါ်ဂျီး ကောင်းမှု အကြောင်းပြု မောင်းထုမည်လဲ လုပ်ရော ဇာတိသရုပ် တစတစ ပေါ်လာ ပါရော။ ပြည်ပ မှာဆို ပိုဆိုးသေး၊ ဝေသာလီပြည် ဘီလူးစီးသလို နွှဲလိုက်ကြတဲ့ နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည် ခံယူပွဲ.. နယ်စပ်ကလာသူ အတော်များများကလွဲလို့ ယူအက်စ်ရောက်မှ လျောက်လွှာတင်သူများ ၉၀% ဖိန့်ဖိန့်တွေ။ သူတို့ဝင်လာတဲ့ ဗီဇာစစ်ကြည့် ကျောင်းသား၊ အလည်အပတ်၊ လုပ်ငန်းကိစ္စ ဒါတွေပဲရှိတယ်။ နယ်စပ်သမားတောင် ရာခိုင်နှုန်း ဘယ်လောက်မှန်လဲ မောင်ဂီ့စော်နော်ရှီး ဆန်ပြုတ်တိုက်ပြီး အတင်းကြောက်ခိုင်းနေတဲ့ ဖလားသခင်ပဲသိမယ်။ နေထိုင်ခွင့်ရတာ အပြစ်မတင်ဘူးနော် သူသူကိုယ်ကိုယ် လုပ်မှာပဲ၊ ရလည်းရရော မြေလျှိုးမိုးပျံ ဇော်ဂျီစိတ်ပေါက် ကိုယ်ယောင်ဖျောက် သွားတဲ့ စားပြီးနားမလည် ဝါးပြီးထွေးထုတ် သခင်မျိုးဟေ့ ဒိုဗာမင် ဝုတ်ဝုတ် စိတ်ဓာတ် တွေကိုပြောတာ။ နိုင်ငံသားအဆင့် မပြောနဲ့ အစိမ်းကတ်လောက်လဲရရော နိုင်ငံရေးဒုက္ခသည် မခံခဲ့ဘူးသလို ယူအက်စ်အစိုးရ ပင့်ဖိတ်လို့ ကြွလာသလို အချိုး ချိုးကုန်ရော။။ သဂျီးတို့ အယ်လ်အေ အဆိုးဆုံးပြောတယ်။ နယူးယောက်သားတွေကတော့ ဆိတ်အချရတယ်၊ နွား သိုး ကျွဲ ဝက် ဘာမှ မရှောင် အကုန်ဆော်တာပဲ။
အခုလည်း လာဗျံပီ.. မြန်တျန့်ပြည်မှာ အရှင်ဝီရသူ..။ ဒီဘုန်းကြီး သိပ်တော့မလွယ်။ (သံဃာလို့ မသုံးဘူးနော်၊ ဘုန်းကြီးလို့ လူအများ ရှိခိုးရတယ်၊ ဘုန်းကံမပါရင် ကျမ်းစုံတတ်လည်း သင်္ကန်းဝတ် မမြဲနိုင်)။ အရင်ကတော့ အမျိုး၊ဘာသာ၊သာသနာ လူပြိန်းကြိုက်အော်တယ်။ နောက်ခံဗိုလ်ပါ မရှိဘဲနဲ့ ဒီလောက် အသံကျယ်စရာ မရှိ..။ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်း ပြင်းထန်စဉ်ထဲက ကြံ့ဖွတ်ပါတီ ဦးအောင်သောင်းတို့နဲ့ အဆက်အသွယ်ရှိကြောင်း စွပ်စွဲချက် ပေါ်ထွက်ဖူးတယ်။ တဖြည်းဖြည်း ဘောင်ချဲ့လာတာ တနေ့က မြန်တျန့်ဒီမိုကရေစီရေးခေါင်းဆောင် ဘွားဒေါ်ဂျီး အိမ်ထောင်ရေးကို ဝေဖန်မှု ပြုလာတယ်။ ဒါတင်မက ဦးသိန်းစိန် မဟုတ်ရင် ဦးရွှေမန်းကို ၂၀၁၅ သမတရာထူး ထောက်ခံကြောင်းအထိ လွန်ကြူးလာပြီ။ နိုင်ငံရေးမှာ တိုက်ဆိုင်မှု မရှိ၊ လုပ်ကြံဖန်တီးချက်သာ ရှိတာမို့ အချိန်မလွန်ခင် ဟန့်ဖို့လိုပြီ။ ခရိုနီ ဦးတေဇကလည်း မန ္တလေးအခြေပြု နိုင်ငံရေး ဆိတ်ဝင်စားတယ် ပြောထားတာမို့ ဆက်စပ်မှု ရှိလေမလား။။
မြန်တျန့်ပြည် အလယ်ပိုင်းနဲ့ မြေလတ်ဒေသ နိုင်ငံရေး ရာသီဥတုကို ခွဲထုတ်လေ့လာဖို့ တိုက်တွန်းခြင်တယ်။ မြန်တျန့်နိုင်ငံဒေါ်အစ အဲဖက်ကမို့ ပြီးတော့ ဗုဒ္ဓယဉ်ကျေးမှု အားကောင်းရာ၊ အစဉ်အလာဓလေ့ ထွန်းကားရာ၊ နိုင်ငံတကာ ဆက်နွယ်မှု အားနဲရာ ပတ်ဝန်းကျင် စရိုက်လက္ခဏာ ရှိတယ်။ ဒီမိုသမားများ အနေနဲ့ ရေတဝက် ဖန်ခွက်ကို နည်းတယ် သွားမလုပ်ဖို့တော့ လိုမယ်။ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုရင် ကိုယ်က ဆင်ပေါ်မှာ ရှိသလောက် အမျိုးသားရေး ကိစ္စကြတော့ ကြံ့ဖွတ်၊ စစ်တဗိုင်းကောင်တွေ အသာရနိုင်တာ သတိကြီးကြီးထား တုံ့ပြန်နည်းဗျူဟာ ဆွဲရမယ်။ ရံဖန်ရံခါ ကိုယ့်အတွက် ပိုင်ဆိုင်မှု asset လို့တွက်ထားသူက ကုန်ပေါက် liability ဖြစ်နေတဲ့အခါ ဆက်ကိုင်မထားတာ ပိုသင့်တော်တယ်။
လွှတ်ချပုံ လွှတ်ချနည်း ညှင်သာဖို့ အရေးကြီးပါမယ်..၊ ကတ္တီပါ လမ်းခွဲခြင်း တဖက်က လက်မခံရင် ဘယ်လို တန်ပြန်မလဲ။ အန်အယ်လ်ဒီက ခြေဆံလက်ဆံရှည် လက်ဝှေ့သမားလိုပဲ ပူးသတ်ချတဲ့အခါ အားနည်းတယ်။ ဂုဏ်သရှိ ပညာတတ်လိုပေါ့ဗျာ၊ စင်ပေါ်တက်ပြော အလှူအိမ်သွား အဆင်ပြေတယ်၊ အဲ.. ကိုယ့်အိမ်ရှေ့လာပြီး နင်ပဲငဆ လာဆဲသူနဲ့တွေ့တော့ ဂွကျရော..။ ထွက်ပြောရအခက်၊ ပြန်လည်းမဆဲတတ်.. ဆဲရင်လည်း မရှိမဲ့ ရှိမဲ့သိက္ခာ ကျဦးမည်။ ကိုယ့်ဆီမှာ နင်တလုံး ငါတလုံး ပြန်ဟစ်ဖို့ လူမိုက်လိုတယ်။ အင်တာနက်မှာ ပြန်ဆော်၊ နာမည်ဝှက်နဲ့ ပြန်ရေး.. အဲဒါတွေက ဦးဆောင်ပါတီအဖို့ မကောင်းဘူး။ ရွာမှာဆို မိုက်ရူးရဲမဟုတ် သတ္တိရှိတဲ့ ကာလသားခေါင်း မွေးရမယ်၊ အရေးကြုံရင် သူက ပြန်ဆဲပေးရမယ်။ အများလက်ခံပြီး နာမည်ရှိသူ လူလတ်ပိုင်း ခေါင်းဆောင်များ၊ တတ်သိပညာရှင်များကို ဆိုလိုပါတယ်။ ပါတီဝင် မဖြစ်လည်း ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စား ဘဂျီးနွား ကျောင်းရဲသူ အချိန်ပြည့် ဗော်လံတီယာ ရှိရမယ်။ နိုင်ငံရေးဆိုတာ ပြောရတော့ခက်သား.. တဖက်သားခြေလှမ်း စောင့်ကြည့် တုံ့ပြန်နိုင်မှ တော်ကာကြမှာမို့ သူချကိုယ်ချတော့ ရှိမှာပဲ။ လွန်ကြူးမသွားအောင် ဆရာကြီးနေရာ ရုပ်အတည်ထိုင်ပြီး ချော့သင့်တန်ချော့ ဟောက်သင့်တန်ဟောက် ကောက်စားသင့်တာစားဖို့ အကျန်ပေးဗျစေ။
အူးကြောင် ကို အနားခေါ်မထားတာ
သန်း ၆ဝ နစ်နာ တယ်
အင်း… ဒီကိုယ်တော်လည်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ တပ်ဦးကျွံလာလိုက်တာ…
စစ်ဝံမင်းများ အသုံးချခံဖြစ်နေပြီဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိရဲ့လားမသိ…
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်မို့ သင်္ကန်းဝတ်ထားတိုင်း ကြည်ညို ခြင်ပေမယ့် ဒီလို စည်းလွတ်ဘောင်လွတ် သာသနာနဲ့မဆိုင်တာတွေကို ပြောလွန်းလာတာ စိတ်ပျက်စရာ။
ဟိုတလောကတင် အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တွေ ဗလီမှာ အော်တာကို ဘာသာပြန်ပြီး တရားထဲထည့်ဟောနေတာ…..
ဒေါ်စုပြောတာကို နားလည်သလို ပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်…
ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဆိုတာ ကိုယ့်ဘက်က ခိုင်မာရင် ဘာနဲ့မှ လဲလို့ မရနိုင်ဘူး။ ဘယ်သူမှ ပြောင်းလဲမပစ်နိုင်ဘူး။
အမေ … ဝီ့ ကို … စိတ်မပျက်ဘူးလား ….ဟင်င်င်…
မား အစောယီး ကတည်း က ပြောဂဲ့ဘာဒယ်ဗျာ….
ဂီ ဝီ့ကိုစိတ်နာနေဒါနာသိသပေါ့။ အဲဒီအုပဒေမထွက်ခင် မင်ဂါချောင်လေအေ။ လာစားပေးမယ် အဆင်သင့်
မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးမှာ.. လူမှုရေးမှာ.. ပညာရေးမှာ.. အထွေထွေရေးရာတွေမှာ.. ဘုန်းကြီးတွေကဏ္ဍ အင်မတန်(အင်မတန်)အရေးပါအောင်လုပ်ခဲ့ကြပြီ…
အခုကစပြင်ရင်တောင်.. နောင်ဂျင်နရေးရှင်း ၂ခုလောက်သွားဦးမှာ..
ဩကာသ.. ဩကာသ.. ငါ့ထိုင်ကန်တော့ကြ…
တမီးတို့က ၈၈ ဦးမိုးဟိန်းကို ကြွေနေတာနော။ သူ့လေက ဆာဂျင်နရယ်ကရက်ဒေါက် ထွက်သွား ဆိုတဲ့လေနဲ့ တစ်လေတည်းပဲ။ ခက်တာက ဂျာနယ်ကလည်း ဘယ်လိုမှဝယ်မရတော့ တမီးတို့ မျက်စိမပွင့် နားမပွင့်ဖြစ်နေတယ်။ သူ့အကြောင်း မှန်းရခက်လိုက်တာ။ သူက တမီးတို့အတွက် မရှိမဖြစ် အရေးကြီးတဲ့ ဆိုးပေကြီး ဖြစ်လာမှာလား။ သူကလေ အသွင်ပြောင်းသွားတဲ့ရန်သူကို တည့်တည့်ကြီးဆော်နေတာနော်။ တကယ်တမ်းမှာ ခိုနီဆိုရင် ဘယ်သူမှ မော်ကြည့်ရဲတာမဟုတ်ဘူး။ အဲ့လာကြောင့် သူက နှလုံးလှလူမိုက်ကြီး ဖြစ်လာမှာလား။ သတင်းပလင်းလေး မ စ ပါ အန်ကယ်ကြောင်။ ကျေးဇူးမမေ့ပါဘု။ တမီး သူ့ကိုကြွေနေလို့ပါ။
ဂူဂဲလ် ကြည့်လိုက်တာ အခြား မိုးဟိန်း ၂ယောက် တွေ့ပါ၏ ဆြာမ..
၁။ နိုင်ငံဒေါ်ကာကွယ်ရေးတက္ကသိုလ် ကြောင်အုပ်ကျီးဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မိုးဟိန်း
၂။ မိုးဟိန်းစစ်ဆင်ရေးဆိုပီး မဆလခေတ် စစ်ဆင်ရေး၁၂ဆင့်လုပ် တိုက်ခဲ့ရတဲ့ မူးယစ်ယာဇာ ရှမ်းသဗုံ ဗိုလ်ချုပ်မိုးဟိန်း တို့ဖြစ်ပါဒယ်ဆြာမ။
အိုက်လော့ ၈၈သွေးနီပါတယ် ဆိုတဲ့အူးမိုးဟိန်းအပေါ် ကြောင့်အမြင်လေး သိဘာရဇေ…
မျက်ကန်းမျိုးချစ်တွေကို မြင်မှ ငယ်ငယ်တုန်းက အနော် ပထမဆုံး ကြည့်ဖူးတဲ့ ဂျက်လီရဲ့ Once Upon Time in China III ထဲက သေနတ်ပီးတယ်ဆိုပြီး သံချပ်ကာ တပ်ထားတဲ့ မျက်ကန်းတော်လှန်းရေးသမား နတ်ကိုးကွယ်သူများကို မြင်ယောင်မိပါသည် ခီညော်
မန္တလေး မစိုးရိမ်ကျောင်းတိုက်မှ အရှင်ဝီရသူ သင်္ကန်းချွတ်ကာ လူထွက်ရန် ဖေ့ဘုတ်ပေါ်ရှိ မြန်မာအသိုင်းဝိုင်းအတွင်း ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် တောင်းဆိုလျက်ရှိကြောင်း၊ ၎င်းကြောင့် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် တစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှ မကြုံဖူးလောက်အောင် ကမာ္ဘတဝှမ်း၌ ဗုဒ္ဓဘာသာ သိက္ခာကျဆင်းနေရသဖြင့် ယခုကဲ့သို့ လူထွက်စေချင်ကြတာဖြစ်ကြောင်း သိရ…. (2-12-2013)
သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ်မှာ ” မီးဒုတ် မီးဒုတ် ရှို့ရှို့ ” ဆိုပြီး ဖတ်လိုက်ရတော့ ရွာထဲက ဦးကြောင်နဲ့ တထပ်တည်း ပါလားလို့သတိထားလိုက်မိပါရဲ့…။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် နဲ့ စစ်အစိုးရအပေါ် တချိန်လုံး ဝေဖန်မှုတွေရေးခဲ့တဲ့ ဦးကြောင်တယောက် ၈၈ ဦးမိုးဟိန်း အကြောင်းမေးတော့ နှာစီးနေသလိုပဲနော်….။
သူရိယနေဝန်း ဂျာနယ်ကို အင်တာနက်ပေါ် မတွေ့လို့ သူများရေးမှ ခေါင်းစဉ် အတိုအထွာ၊ ထင်မြင်ချက်လောက်ပဲ ဖတ်ခွင့်ရပါဒယ်ခင်ညာ.. ဒီတော့ သူ့ကို ဘာသွားရေး ဘယ်လိုသွားဆဲ မလဲ။ အခြားဂျာနယ်တွေက အွန်လိုင်းမှာ ဒေါင်းလုပ်ယူ ဖတ်လို့ရနေတော့ အစိမ်းဗူး။